mardi, 09 juillet 2019 21:46
Angoaka Sud – Analalava: Tazomina am-ponja vonjimaika ny Ben’ny tanàna
Voarohirohy amina raharaha vono olona niniana natao, fampijaliana miharo fanerena olona hanome vola ramatoa ZAFINTSOAVINA Séverine, Ben’ny tanànan’ny Kaominina Angoaka Sud, Distrikan’Analalava, Faritra Sofia ity. Tazomina am-ponja vonjimaika nanomboka ny sabotsy 6 jolay teo izy.
Ny loharanom-baovao sasany milaza fa fampiharana ny dina besaboha no anton’ireo zavatra iampangana ny Ben’ny tanànan’Angoaka Sud ireo ; ny loharanom-baovao hafa indray manipika mazava fa tsy mbola nahazo fankatoavana tamin’ny Fitsarana io dina besaboha io, ka tsy tokony ampiharina. Atolotra ny mpitandro ny filaminana sy ny Fitsarana izay olon-dratsy na nanao fandikan-dalàna, satria tany tan-dalàna i Madagasikara.
Mandeha ankehitriny ny tsindry ny tsy maintsy hamoahana an’io Ben’ny tanàna io ao am-ponja.
mardi, 09 juillet 2019 20:24
Antenimieram-pirenena: Vehivavy ny 26 amin’ireo solombavambahoaka 151 voafidy
Niisa 152 ireo vehivavy nirotsaka hofidiana ho solombavambahoaka tamin’ny fifidianana notontosaina ny alatsinainy 27 mey 2019. Lohalisitra ny 111 tamin’izy ireo.
26 no voafidy, na 17,2% amin’ny parlemantera mandrafitra ny Antenimieram-pirenena ho an’ny taom-piasana 2019-2023. Natolotry ny antoko politika ny 19 amin’ireo vehivavy voafidy ho solombavambahoaka ireo.
Tsy nahitana vehivavy voafidy depiote tamin’ny Faritra miisa dimy eto Madagasikara, dia tao Atsimo Andrefana, Bongolava, Ihorombe, SAVA ary Vakinankaratra.
Fiainana antoko: Hiatrika kongresy ny Tiako i Madagasikara
Hiatrika kongresy nasionaly ny antoko Tiako i Madagasikara. Haharitra roa andro izany, ny zoma 12 sy sabotsy 13 jolay 2019, eo amin’ny Magro Tanjombato Antananarivo.
Mandritra io no mety hanavaozana ny mpikambana ao amin’ny birao politikan’ny antoko, taorian’ny fisintahan’ireo mpikambana sasany toa an’i Fernand Jeannot, filoha lefitry ny Tiako i Madagasikara, faritany Mahajanga.
Senatera voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Tiako i Madagasikara tao amin’ny faritanin’i Mahajanga i Fernand Jeannot, nita rano nankao amin’ny IRD (Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina) izy, ary kandidan’io vovonana politika io tamin’ny fifidianana solombavambahoaka ny 27 mey 2019 tao amin’ny Distrikan’Ambatoboeny, faritra Boeny ary voafidy.
mardi, 09 juillet 2019 17:41
Kitra – CAN 2019: Hiasa ny VAR manomboka eto
Hiditra an-tsehatra ny VAR (Assistance Vidéo de l'Arbitrage) amin’ny fitantanana ny lalao manomboka ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra na CAN 2019, tanterahina any Egypta ny 21 jona hatramin’ny 19 jolay 2019.
Niatrika fiofanana momba ny VAR ny Barea an’i Madagasikara androany, fiofanana izay karakarain'ny Kaofederasiona afrikanina momba ny baolina kitra.
mardi, 09 juillet 2019 17:12
Jaona Elite: Andrasana eny Tsimbazaza ny nofomangatsiakany
Nigadona teny amin’ny Antenimieram-pirenena androany tolakandro ny nofomangatsiakan’i Randriarimalala Harijaona na « Jaona Elite ». Andrasana eny ny faty anio alina, ary eny no hiainga ho eny amin'ny fiangonana FJKM Andravoahangy Fivavahana hanaovana ny fanaovam-beloma azy farany, mialoha ny fandevenana azy eny amin’ny fasan-drazany eny Ankatso rahampitso alarobia 10 jolay.
Lehilahy iray matin'ny hafaliana nijery baolin’ny Barea.
mardi, 09 juillet 2019 13:30
Antsiranana: Tontolon'ny asa fanaovan-gazety
Notontosaina ny 08 Jolay 2019 teto amin’ny Alliance Française Antsiranana ny fakan-kevitra isam-paritany momba ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny serasera. Tanjona hoy i Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, Minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, izay nitarika izany, dia ny mba hisian’ny fiantohana sy fiarovana betsaka ny mpanao gazety. Mba hahaleo tena tanteraka ihany koa ny avy ao amin'ny Holafitry ny mpanao gazety, fa tsy hobaikon’ny Ministera na ny mpitondra intsony, ary ny faniriana dia mba izay tena tapaka mandritra ny fakan-kevitra tokoa no hivoaka any, fa tsy hoy toy ny lalana 2016-029 tamin’ny 14 Jolay 2016, izay maro ny zavatra tsy tafiditra na nisy ihany koa no tokony hahitsy na hohesorina mihitsy.
mardi, 09 juillet 2019 12:59
Kitra – CAN 2019: Miatrika fanazarantena ao Le Caire ny Barea
Manoman-tena ao Le Caire ny Barea anio. Omaly no niala tao Alexandrie tamin’ny fiarakodia lehibe, niazo ny renivohitr’i Egypta, ny ekipam-pirenena malagasy, hiatrika ny ampahefa-dalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra, ary dia miatrika fanazarantena nanomboka androany.
Hiakatra kianja i Marco Ilaimaharitra amin’ny alakamisy alina, mandritra ny lalao hifandonan’ny Barea an’i Madagasikara amin’ny voromahery Tonizianina, rehefa tsy afaka nilalao tamin’ny ampahavalon-dalana nihaonana tamin’ny Léopard RD Congo noho ny karatra mavo roa azony nandritra ny lalao fifanintsanam-bondrona.
mardi, 09 juillet 2019 12:10
Filaminana an-dranomasina: Sady tsy ampy ny fampitaovana no tsy misy ny fandrindran’asa
Nisy fivoriana mahakasika ny filaminana an-dranomasina natao teny amin’ny Lapan’I Mahazoarivo, omaly, notarihin’ny Praiminisitra. Niaiky ny fanjakana fa tsy ampy ny fandrindran’asa amin’ny fitandroana ny filaminana an-dranomasina. Tsy ampy ihany koa ny fampitaovana amin’ny fanaraha-maso sy fiarovana ny fari-dranomasin’i Madagasikara amin’ireo ambana samihafa, toy ny fifindra-monina an-tsokosoko, ny fanondranana zava-mahadomelina, ny fitrandrahana an-tsokosoko ny harena anaty ranomasina, ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena ary ny fahaverezan’ny solika an-dranomasina.
mardi, 09 juillet 2019 10:45
Fandriampahalemana: Najoro ny foibe fanaraha-maso ireo vondrom-pisafoana
Nitsidika ny foibe fanaraha-maso an’ireo vondrom-pisafoana ho amin’ny fandriampahalemana avy amin’ny Tafika Malagasy, teny amin’ny ministeran’ny Fiarovam-pirenena ny Praiminisitra Ntsay Christian, omaly. Nampahatsiahiviny ny maha-zava-dehibe ny fanambarana ny antontan-kevitra sy ny fiaraha-miasa eo anivon’ny vondron-kery rehetra, eny hatramin’ireo andrim-panjakana toy ny fiadidian’ny Repoblika sy ny primatiora, ary ireo ministera.
Fitaovana vaovao ahafahana manara-maso ara-potoana an’ireo mpitandro ny filaminana mielipatrana, ary ahafahana mahita avy hatrany koa ireo izay mila vonjy sy handraisana andraikitra haingana no nanaovana fanandramana nandritra ny fitsidihana, ary nilaza ny Praiminisitra fa azo trandrahana amin’ny sehetra hafa hanatsaràna ny fiainam-bahoaka izao fomba fiasa napetraka izao.